Virus ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ-အပိုင်း(၂) | mmCert
၁။ Anti-virus ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ virus ကာကွယ်ရန်အတွက် မလုံလောက်ပါ။ Removal tools ကို install လုပ်ပြီးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ (virus ကာကွယ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် တွေဟာ PC ကို spyware ဒါမှမဟုတ် adware တွေ ကူးစပ်မှုများကိုကာကွယ်မပေးနိုင်ပါ။
၂။ Spyware/Adware removal tools များကိုအနည်းဆုံး၂ခုထားပါ။ (anti-virus tool တွေ ကသာ အချင်းချင်းconflict ဖြစ်တက်ကြပေမယ့် spyware ကာကွယ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ကတော့အချင်းချင်း conflict မဖြစ်ကြပါဘူး။
၃။ Firefox လား? IE လား? သေချာစွာ စဥ်းစားပါ။ (များသောအားဖြင့် spy-wareတွေဟာ အဲဒီလို browser နှစ်ခုအကြား ဗျာများ နေတဲ့ အချိန်မှာ ဎင်လာတတ်ပါတယ်။ တချို့ website တွေဟာ IE နဲ့အသုံးတဲ့ပြီး တချို့ကျတော့ firefox နဲ့မှ အဆင်ပြေ တတ်ကြတဲ့ အတွက် တွေဎေမှုကို လှေျာ့ချပါ။
၄။ P2P ကွန်ရက်ကို သတိထားပါ။ (’.torrent’ တွေကနေ တစ်ဆင့် adware/spywareတွေ ကူးစက်တတ်တာ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်လာနေပါပြီ။ မလိုအပ်ရင် P2P မသုံး ဘဲ ရိုးရိုးသာdownload ချပါ။
၅။ Bazooka Scanner ကို down-load ရယူပါ။ (spyware,adware) ရှိမရှိ အဓိက စစ်ဆေးပေးတဲ့ bazooka scanner ကို အခမဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
၆။ Software update ကို ကိုယ်တိုင်တိုင် လုပ်ပါ။ (တစ်ခါတစ်လေမှာ Softwareupdate လုပ်ပေးပါမယ် ဆိုတိုင်း အတင်းကာရာ လက်မခံ လိုက်ပါနဲ့။ အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ anti-spyware ဟာ update ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပါ။)
၇။ Firewall ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ပါ။ (ဥပမာ Zonealarm လိုမျိုးfirewall ဟာ အမြင်ကတ်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို တာဝန်ကျေပြီး ကိုယ်သုံးစွဲချင်တဲ့၊ ယုံကြည်ရတဲ့ software list တွေကို သူ့ကို ပေးထား လိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် firewall ထားရှိတဲ့အတွက် RAM ကတော့ မသိမသာထပ်လိုပါမယ်။)
၈။ EULA ကို ဖတ်ပါ။ (end user license agreement ဆိုတာဟာ Software တိုင်းနဲ့ website အတော် များများမှာ ပါဝင် တတ်ပါတယ်။ Software အသစ်တစ်ခုဟာ ကိုယ့်နဲ့ မရင်းနှီးသေး ရင် EULA ကို အဓိကထားပြီး ဖတ်ရှုပါ။
၉။ Back up လုပ်ပါ။ (ပညာရှင်တိုင်း လိုလိုက data တွေကို back-up လုပ်ဖို့ အကြံပြုခဲ့ပေမယ့် user တိုင်းလိုလိုက မေ့လျော့ နေကြဆဲပါ။ အရေးကြီးတဲ့၊တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ မဆုံးရှုံးစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေထဲက တစ်ခုကbackupလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။)
၁ဝ။ Home page ပြောင်းလဲ သွားတာမြင်တာနဲ့ scan လုပ်ပါ။ (ကိုယ်တိုင် မသိလိုက် ပါပဲနဲ့ home page ပြောင်းလဲ သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း scan လုပ်ပါ။ အဲဒါဟာ spyware ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း များနေပါပြီ။)
၁၁။ Window ကို အဆင့်မြှင့် တင်ပါ။ (အကယ် XP သုံးစွဲနေရင် service pack2ကို ပြောင်းလဲ သင့်ပြီး XP SP2 သုံးစွဲနေရင် vista ကို အဆင့်မြှင် ့တင်သင့် ပါတယ်။ လူသိ နည်းနေတဲ့ OS ဟာ အတိုက်အခိုက် ခံရမှုနည်းပါး နေဦးမှာပါ။)
၁၂။ ကြော်ငြာတွေဟာ spyware တွေလား။ (မသေချာပါ။ ကြော်ငြာတိုင်းဟာ spyware မဟုတ်သလို spyware တိုင်း ကတော့ Advertising တိုင်းဆီကနေဝင်ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။)
၁၃။ Keylogger တွေကို ကာကွယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ (တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် ဗဟုသုတနည်းပါး နေရင် keylogger တွေ ရဲ့ သွင်ပြင် လကခဏာ တွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုပါ။ ”Ctrl+Alt+Del’ သုံးစွဲပြီး system မှာ run နေတဲ့ မသင်္ဪာတဲ့ ”e×e’ ဖိုင် မှန်သမှျကို ဖယ်ရှား ပစ်ပါ။ အဲဒီလို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း အားဖြင့် system ဖိုင်အစစ်တချို့ ဆိုရင် လတ်တလောမှာ အလုပ် မလုပ် တော့တာကလွဲပြီး ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။)
၁၄။ အများသုံး ကွန်ပျူတာတွေ ဆီမှာ ကိုယ်ပိုင် အချက်တွေ မသုံးစွဲ ပါနဲ့။ (လူအများနဲ့ စပ်တူ သုံးစွဲရတဲ့ ကွန်ပျူတာ တွေဆီမှာ လိုအပ် ချက် ကြောင့်(ဥပမာ cyber cafe လိုမျိုး နေရာ) ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်တွေ သုံးစွဲရမယ်ဆိုရင် သတိ ထားပါ။ ကွန်ပျူတာကနေ ထွက်ခွာ မယ်ဆိုင်ရင် ကိုယ့် historyတွေကိုရှင်းလင်းပစ်ခဲ့ပါ။
၁၅။ Upload ဖိုင်တွေကိုလဲ သတိထားပါ။ (ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် အခြား အချက် အလက်များ မဖြစ်မနေ တင်ပို့ ရပြီ ဆိုပါရင် secure ရှိတဲ့web host တွေကို သုံးစွဲပါ။)
၁၆။ Anti-spyware software အခမဲ့ပေးတဲ့ website- ဥပမာအားဖြင့် AVG anti-spyware website ကနေ အခမဲ့ ပေးထား ပါလျက်နဲ့ download ချလို့မရနိုင်တာ မျိုးရှိပါတယ်။ (အဲဒါဟာ သိပ်ကောင်းပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်PCမှာ spyware ဝင်နေတာကို AVG ကသိနေလို့ပါ။ နောက်တစ်မျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ spyware က anti-spyware ကိုလက်မခံလို့ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့သတိကြီးကြီးနဲ့ရှင်းလင်းပစ်ရပါလိမ့်မယ်။)
၁၇။ DOS တိုက်ခိုက်မှု ရှိလာနိုင်သလား။ ကွန်ပျူတာရဲ့ အတွင်းပိုင်းစနစ်အထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ P2P network မှာ ကိုယ်မသိတဲ့ လူတွေဆီကို sharing မလုပ်ဖို့နဲ့ အခမဲ့ရတဲ့ software တိုင်းကို မယုံကြည်ဖို့ zip/ rar file တွေကို သတိ ထားဖို့ လိုပါမယ်။
၁၈။ Icon တွေကို desktop ပေါ်မှာအတင်းအကျပ် နေရာယူပြီဆိုရင် spyware ဖြစ်နေပါပြီ။ (ဆော့ဖ်ဝဲတိုင်းမှာ desktop icon shortcuts သဘောမျိုးဖန်တီးပေးပေမယ့် သုံးစွဲသူ ခွင့်မပြုဘဲ နေရာ မယူတတ်ကြပါ။)
၁၉။ အချက်ပေးပုံသဏာန်တွေ မှားယွင်နေတဲ့အခါ anti-spyware ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိပါ။ သူတို့ကိုရှင်းလင်း ပစ်တိုင်းမှာ uninstall ကိုအသေအချာ ပြုလုပ်ပါ။ သဘောတရားအရပြောရရင် anti-spyware ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုယ်ကspywareတစ်ခုပါပဲ။
၂ဝ။ Remote Access Trojan ဆိုတာ virus လိုမျိုး။ program ငယ်ကလေး တစ်ခုကို ကွန်ပျူတာ စနစ်အတွင်း ကိုယ်မသိ လိုက်ရပါပဲ ဝင်ရောက်စေခဲ့ပြီး အဲဒီ Program ကလေးဟာ ကိုယ်လုပ်နေသမှျ သတင်းအချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစစ မှန်သမှျကို ပိုင်ရှင် ဆီကိုသတင်းပြန် လည်ပေးပို့ နေလေ့ရှိပါတယ်။
၂၁။ Drive-By Download ဆိုတာ အဓိက အားဖြင့် ပုဂဂလိက အချက်အလက်တွေနဲ့ လုံခြုံမှုကို ထိပါးစော်ကားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှှုတစ်မျိုးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကြော်ငြာ pop-up တွေကို သတိထားပြီး တားဆီးမယ် ဆိုရင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ခံရမှု မရှိနိုင်ပါ။ Pop-up blocker ပါဝင်တဲ့ firefo×လိုborwserမျိုးကိုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
၂၂။ Search bar တွေကို မယုံကြည်ပါနဲ့။ google.com နဲ့ google toolbar… Yahoo နဲ့့Yahoo toolbar တို့လို ယုံကြည်စိတ်ချ ရတဲ့ အရာတွေ ရှိနေပြီးတဲ့ အချိန်မှာ web ကို အထူး ရှာဖွေပေးမယ် ဆိုတဲ့ toolbar တွေကိုယုံကြည်ကိုးစား မနေပါနဲ့တော့။ www.google.com လို့ address bar မှာ ရိုက်လိုက်ရတာဟာ မရေရာ မသေချာတဲ့ toolbar တွေကို install လုပ်လိုက်နေတာထက် အများကြီး လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။
၂၃။ ဒီနေရာကိုသွားပါ။ Virus နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းအဆိုးတွေကို ပုံမှန်သတင်းပေးရင်း ကာကွယ် ဖို့နည်းလမ်းတွေကို အခမဲ့ ဖြန့်ချီနေတဲ့ နေရာတွေရှိသလို အခု website တွေကတော့ spyware, adware, malwareစတာတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းဖို့ သတင်း တွေ၊ tools တွေ၊update new တွေ ရနိုင်ပါတယ်။